Mpilatro Tsetsenina Nahazo Tsikera Noho Ny Fiarahamiasany Amin’ny Pelaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2016 4:38 GMT
Noho ny tabataba, nafenin'i Bisultanova ho rindrina ho azy manokana ny kaontiny Instagram. Manana mpanjohy mihoatra ny 75.000 izy.
Iray amin'ireo endriky ny lamaody hijab sy abayas vaovao an'ny Dolce & Gabbana i Bisultanova, ireo olona mpitafy lamaody lafo vidy eo amin'ny tontolon'ny Silamo no kendrena hividy izany. Jereo ny sary ary ahoana ny hevitrao, mifanaraka amin'ny anjara toeran'i Bisultanova ve izany?.
Araka ny televiziona tsy miankina Dozhd, dia vao haingana i Bisultanova no nijanona niasa tao amin'ny tranon-damaody Firdaws ao Grozny, tantanin'i Medni, vadin'i Ramzan Kadyrov. Herinandro maromaro lasa izay, nanomboka ny sehatra lamaodiny manokana i Bisultanova, “Masterskaya an'i Ilona Bisultanova.” “Navadika sehatra an-takonana ho an'ny tena manokana ihany koa ny kaonty Instagraman'ny orinasany izay manana mpanjohy maherin'ny 21.000.)